Andianà Mpikatroka Miady Amin’ny Kolikoly Voatafika Tao Rosia . Te-hividy Tapakila Handraisana Fiaramanidina ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2016 3:09 GMT
Artem Torchinsky, mpanao gazety sady mpandrindra ny tetikasa Tranobe Iadiana Amin'ny Kolikoly, nitsirara teo amin'ny tany, naratra teo ivelan'ny seranampiaramanidina Anapa. Sary: YouTube. Nataon'i Kevin Rothrock.
Misy fisafotofotoana ny momba izay namely totohondry voalohany teo ivelan'ny seranampiaramanidina androany 17 May tao Anapa, fa lehilahy iray aloha raha kely indrindra—mpanao gazety sady mpikatroka miady amin'ny kolikoly miaraka miasa amin'i Alexey Navalny—no naiditra hopitaly, taorian'ny niantefan'ny dona eny amin'ny lohany. Lohatenim-baovao voalohany ho an'ny media sosialy Rosiana maro androany ny vaovao momba ny fanafihan'ilay andianà Cossack an'i Navalny sy ny manodidina azy, ary nohararaotin'ny orinasa mpikarakara fivahinianana, Aviasales, hakàna tombony ilay tantara, tamin'ny fampidirana azy io ho ao anatin'ireo lahatsoratra tao amin'ny Facebook, Twitter, ary Vkontakte.
“Lazain-dry zareo fa miandry hiarahaba tongasoa ireo mpitsidika ao amin'ny seranampiaramanidina Anapa ireo Cossacks. Azonao atao ny mahazo tapakila eto, manomboka amin'ny 999 robla monja [$15],” hoy ny nosoratan'ilay orinasa, nasiany sarinà Cossack amin'ny endrika hentitra ho lafika, sy fanazavàna mivaky hoe “Velcome!”
Tsy tafita tsara tany amin'ireo maro mampiasa aterineto ilay tabataban'ny haino aman-jery sosialy, niteraka korianam-panehoankevitra miiba sy ezaka azo lazaina ho avy hatrany mba hanaovana ankivy ny Aviasales. Ohatra, i Lev Parkhomenko avy amin'ny Akon'i Maosko dia nandrahona ny hitsikera ilay orinasa isak'izay fandaharana ataony ao amin'ny onjampeo, nitarika an'i Konstantin Kalinov, mpanorina ny Aviasales haneso ny “fikorontanan”i Parkhomenko. Avy eo niantso ny vahoaka i Parkhomenko hitaraina amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Aviasales, amin'ny filazàna fa andrasany ireo fandraharahàna hafa ireo mba hanapaka ny fifamatorany amin'ilay orinasa mpikarakara fivahinianana, ho fiarovana ny lazan'izy ireo.
Mpanjifa tezitra ka namafa ny fampiasa IOS an'ny Aviasales. Sary: Facebook
Ao anatin'ireo fanehoankevitra ao amin'ilay lahatsoratry ny Aviasales ao amin'ny Facebook, nanomboka nampakatra pikantsary ny hafa, mampiseho azy ireo mamafa ny fampiasa Aviasales natao ho an'ny finday tsy ho ao anatin'ny azy.
Ao amin'ny Twitter, miala any koa ny fanentanana ‘henatra’ natao ho an'ny daholobe. Iray mpampiasa Twitter no nanontany tena raha toa ny Aviasales mety ho nanao vazivazy ratsy tahaka izao taorian'ny nanapahana ny lohan'ilay ankizy iray iny , entiny hilazàna ny namonoan'i Gyulchekhra Bobokulova ilay zazavavy kely efatra taona tao Maosko, tany ampiandohan'ity taona ity.
Amin'ny manaraka, hanolotra tapakila amin'ny 999 robla mankany Maosko koa ve ianareo, mba handehanana mijery zaza iray notapahan-doha?
Efa fahazaran'ny Aviasales ny mampiditra ireo tranga miseho ho ao anatn'ireo fampahafantarana “manafintohina” ety anaty haino aman-jery sosialy. Saingy milaza ireo sasany mpankafy ilay orinasa mpikarakara fivahinianana fa lasa lavitra loatra ry zareo tamin'ny fanesoana ilay fanafihana androany nanjo ny tarik'i Navalny. Arseny Bobrovsky, mpanoratra ilay fakantàhaka malaza ny kaonty “KermlinRussia,” nilaza fa leo izy :
O ry zalahy a, ianareo no nanana ny fomba nahafinaritra indrindra tamin'ny resaka fivarotana tety anaty haino aman-jery sosialy—tsara loatra ka na izaho aza dia nizara azy ireny maimaimpoana. Fa ankehitriny, tafahoatra loatra. 🙁
Mbola manana ny mpanohana azy hatrany anefa ilay orinasa mpikarakara fivahinianana, ary ampangain'izy ireny ireo ao ambadik'ilay valifaty ho manao mizàna tsindrian'ila, amin'ny filazàna fa naneso olo-malaza manampahefana ny Aviasales tany aloha tany, fa tsy nisy fitarainana avy amin'ny “intelligentsia” liberaly.
Tamin'ny Aprily lasa teo, naneso ny Praiminisitra Lefitra, Dmitry Rogozin, ilay orinasa, noho ny fanasazian'ny Filoha Putin azy taorian'ny nanemorana ny lanonana nandefasana ilay fiarandanitra tsy misy olona mitondra, avy ao amin'ny toby ao Vostochny. Tamin'ny Febroary, noesoin'ny Aviasales i Dmitry Peskov, rehefa nipoitra tety anaty aterineto ny saripika iray mampiseho azy miandry teo amin'ny toerana iray fanasàna fiara, nitafy akanjomandry lafo vidy.